Madaxweynaha oo kulan la qaatey qaar ka mid ah oday dhaqameedyada Soomaaliyeed – idalenews.com
Madaxweynaha oo kulan la qaatey qaar ka mid ah oday dhaqameedyada Soomaaliyeed
Xassan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Soomaaliya oo habeenkii xalay ahaa la kulamay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee soo xulay baarlamaanka ayaa waxa uu daaha ka rogay ama shakiga ka bixiyay halka ay ka bexeen lacago fara badan oo shirar madaxweynuhu uu ka qeyb galay looga yaboohay.
Waxaa Suura gal ah in lees weydiiyo halka ay ka bexeen lacagihii faraha badnaa ee dowlada loogu yaboohay. Waxaan hortiinna caawa ka cadeynayaa in aysan lacagahaasi wali nasoo gaarin. Waxaa jira $4mn oo ay nasiiyeen afar dowladood oo kala nuuc ah”, Madaxweynaha ayaa sidaa u sheegay xubna kamid ah 135-tii oday ee dowladaan aasaaska u ahaa.
Dowlada Soomaaliya ayaa horay loogu yaboohay lacago fara badan oo gaaraya malaayiin doolar taas oo sida ku cad hadalka madaxweynaha arintoodu ay aheyd af kala baxaal hasa yeeshee wali wax ficil ah aysan sameyn.
Dhanka kale, Madaxweynaha ayaa waxa uu ugu baaqay odayaasha in ay dowlada ula shaqeeyaan habka ugu wanaagsan ee dalka horumar lagu gaarsiin karo isaga oo ku taliyay si taa loo gaaro in ay odayaashu sameestaan guddi dowlada iyo iyaga xariiriya si ay isaga war qabaan.
Si kastaba, kulanka madaxweynuhu uu odayaasha la sameeyay ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee waayahaan dhaca, waxaana uu ku soo beegmayaa xilli dowlada Soomaaliya ay ku taaganyihiin caqabado aad u badan.
Dhageyso Xildhibaan C/laahi Cumar Abshir: “Ciidamada Militariga ee Gobolka Shabeelaha Hoose waa kuwa qaab beelood oo aan deegaankaas ka soo jeedin waa in laga soo qaadaa”
Gaari uu lahaa Xildhibaan Sheekh Aadan Madeer oo ku qarxay Wadada Via Eegito ee degmada Xamar weyne + sawiro